Madaxda Dowladda Soomaaliya Oo Ku Faraxsan Ansixinta Xukuumadda Farahabdan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
22nd January 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud iyo raysul wasaare C/weli Sheekh Axmed ayaa ku farxay ansixinta golaha wasiirada cusub ee ka kooban 55-ta xubnood, kuuwaasoo dhalay goor dambe oo galab ah baarlamaanku ansixiyey.
Madaxweynaha ayaa yiri: “Waxaan soo dhoweynayaa oo aan ammaanayaa sida mas’uuliyadda ku jirto ee demoqraadiyada ah ee baarlamaanku u ansixiyeen golaha wasiirada. Tani waa tallaabo dhanka horumarka loo qaaday oo ay tahay shaqsi walba inuu soo dhaweeyo”.
“Ansixintan golaha wasiirada oo matala dhammaan shacabka Soomaaliyeed ahna danta shacabka ayaa wax ay shacabka iyo caalamka tuseysaa in hay’adaheena dowliga ah ay yihiin kuwo mas’uuliyada ballaaran ee saaran u gudan kara si muhiim ah.” Ayuu sidoo kale yiri Xasan Sheekh.
“Waxaa hadda lama huraan ah in xukuumada cusub ay bilowdo howlaha muhiimka ah ee horyaalla. Waxaana horyaalla caqabado badan, hase ahaatee Soomaalidu waxey ka sugayaan in horumar laga sameeyo dhan walba. Waa inaan goobaha haray ka saarnaa Al-Shabaab oo aan waddanka nabadeynaa, si aan u joojiyo khatarta argagaxisada” ayuu sidoo kale yiri.
“Goobaha cusub ee gacanta dowladda soo galana waa in shacabka la gaarsiiyaa adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada. Canshuurahana waa in la bilaabaa oo gundhig u ah dib-u-habeynta iyo maareynta maaliyadda, si aan
Dhanka kale, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa uga mahadceliyay golaha Baarlamaanka kalsoonida ay siiyeen golaha Xukuumada, wuxuuna xusay in wixii haatan ka dambeeya ay u howlgalayaan sidii dalka loo samatabixin lahaa.
Xukuumaddan oo lagu soo dhisay si dhib badan ayaa laga cabsi qabay iney culeys badan kala kulanto baarlamaanka Soomaaliya, hase ahaatee waxaa u suuragashay 21-kii Janaayo 2014 iney baarlamaanka ka gudubto.
Somalia:President welcomes Parliament’s approval of new Cabinet